WOWOW Ekhitshini ompompi kunye Tsala ezitshizi, Matte Black 304 Stainless High Arc Single Singatha Tsala Ezantsi Faucet Ikhitshi
ikaliwe 4.50 Kwi-5 esekelwe kuyo 2 amanqaku umthengi
Stainless Ikhitshi Faucet kunye Khupha Out sisitshizi Head
-Nyusa itepu kwaye ikhitshi lakho liya kuba lihle ngakumbi! Isinki yesinki eluncedo ngesitshizi!
Uyilo lweBALL GRAVITY BALL, yenza ukuba itepu ibe lula ukukhupha kwaye irhoxe. Ibhola yomxhuzulane inokurhoxisa isitshizi ngokuzenzekelayo.
I-Matte Black FINISH yinkangeleko entle esebenza ngayo nayiphi na indlela yokuhombisa ekhitshini lakho.
3 UKUSETYENZISWA KOMSEBENZI kukuvumela ukuba uguquke ngokulula kwaye ngokuguqukayo ukusuka kwisitshizi uye kumjelo kwaye wandise ukusebenza kwekhitshi lakho.
Siphinde sayitshintsha le faucet yethu yasekhitshini ngale mveliso, kwaye ilungele ikhitshi lam ngokugqibeleleyo. Inemiyalelo eneenkcukacha zokufaka eyenza kube lula ukuyifaka. Umgangatho nawo ubalaseleyo. Ijonge kwaye isebenze ngaphandle kwesithintelo. Kucetyiswa kakhulu.
Yinto entle umpompo wokuntywila ekhitshini! Ukutsala kwayo ukutshiza kulunge kakhulu. Yenziwe ngentsimbi engenasici kwaye umgangatho wayo uphezulu ngexabiso eliphantsi. Unganqikazi ukuyihlawula.